Best Buy inomanikidzwa kunonoka kusvika kweiyo nyowani Apple Watch Series 2 uye inobhadhara avo vakaitenga | Ndinobva mac
PaKeynote munaGunyana 7, kuwedzera kune iyo nyowani iPhone 7 uye 7 Plus, iyo nyowani Apple Watch Series 2 yakaunzwa, mawadhi matsva akangwara ane dhizaini yakafanana neiya atatoziva kare asi ikozvino sanganisira nyowani mbiri-musimboti processor, GPS chip uye haina mvura kusvika 50m.
Izvi zvitsva Apple Watch Vachaendawo kutengesa mangwana ndosaka nhau dzatiri kuzokupa dzakakosha kwazvo. Tinokuudza izvi nekuti iyo portal yekutengesa zvigadzirwa zvehunyanzvi paInternet, Best Buy yakatumira maemail kune vanhu vese vakafanotenga yavo Apple Watch Series 2 kuitira kuti vasvike kudzimba kwavo musi waGunyana 16, zvichiratidza izvo zvichaitika kunonoka mukutakura nekuda kwezvinhu zvemasheya neApple.
Vazhinji maSaurians asiri kuzofara zvachose mangwana uye fungidziro yekuti mangwana vanga vaine yavo itsva Apple Watch Series 2 mumaoko avo zvanyangarika kana vakazvichengetera pa Best Buy webhusaiti. Sezvineiwo, nekuda kwematambudziko ehurongwa neApple pachayo, zvikamu zveApple Watch Series 2 zvakatengesa kubva payakatanga Nguva yekuchengetera haizokwanisi kuendeswa kusvika munaGunyana 28, zvinoenderana nekwaunogara.
Iyi ndiyo email iyo avo vanokanganiswa vari kugamuchira:
Best Buy anoziva nezve dambudziko iro zvese izvi riri kuzovakonzera uye ivo vakasarudza kupa munhu wese akabatwa a voucher yechipo chemadhora makumi mashanu kushandisa pane yako inotevera Kutenga Kwakanyanya kutenga kutenga kune chero kunetsekana kunonoka kunogona kukonzera. Chokwadi ndechekuti Idzo nhau dzakaipa kwazvo kuti vashandisi vazhinji vane chokwadi chekuti havasi kuzotora zvese zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Best Buy inomanikidzwa kunonoka kusvika kweiyo nyowani Apple Watch Series 2 uye inobhadhara avo vakaitenga
Apple inogadziridza macOS Sierra Goridhe Master pasvondo isati yatanga